JAR-ISKA-TUURKA HAWEENKA. W/Q  AXMED CALI DIIRIYE |
JAR-ISKA-TUURKA HAWEENKA. W/Q  AXMED CALI DIIRIYE
Muddo ka dib markii ay in muddo ah wada sheekaysanayeen, wiilkii waxa uu inantii ka dalbaday in uu nolol la wadaago oo ay is guursadaan. Inantii ayaa waxa ay ugu jawaabtay in ay arrinkaa ka soo fikirto.
Asxaabteeda kuwii ugu dhawaa uguna qaalisanaa agteeda ayay u bandhigtay arrintan ku soo korodhay si ay talo wanaagsan u siiyaan. Mid ka mid ah ayaa tidhi “Naayaayee, ma inaga adduunka waxba ka aragnayba! Waa maxay guurka iyo waxan uu kuula yimi?! Aynu iska nafisno, iska xarabaysanno, ragga si fiican u kala baro; hadhowna, iska guurso haddii ay kuu gaadho!” Inantii ayaa iyada oo faraxsan baa waxay ku qanacday taladaa ay siisay saaxiibad oo ay aad u jeceshahay.
Wiilkii waxa uu inantii ka sugayaa in ay ku soo war celiso. Wey isku yimaaddeen weyna kulmeen. Is xaal waraysi kooban ka dib, inantii waxay ninkii ku tidhi “Walaalow I dhagayso, anigu inan yar baan ahay adduunkana waxba kama arag. Ka daranta, indhuhuba iimay dillaacin. Sidaa daraadeed, anigu guur diyaar uma ihi.” Wiilkii indhaha ayaa soo baxay waayo muu filanaynin jawaabtan oo kale. Qofku guurka uu ka cudur daaran karaa, balse, waxa ad uga sii yaabiyay sababaynta gabadha. “Mar haddii aad sidaa go’aansatay, waan kugu ixtiraamayaa go’aankaaga. Walaaltinimo uun aynu ku wada soconno!” ayay isku sii af garteen.
Wiilku nin maskax badan ayuu ahaa. Wuxu fahmay in ay sirta noloshu ku jirto in aan qofka la is wada siinin waayo xaga danbe ayuu ka xumaan karaa. Sida oo kale, qorshayaal labaad, saddexaad iyo afraad ayuu sii diyaarsaday. Markiiba wuxu wacay gabadh uu ka dhigtay qorshaha labaad – macnaha haddii ay inanta koobaad is fahmi waayaan, in uu inan labaad u soo bandhigo nolol mustaqbal leh. Inantii ayuu arrintii u sheegtay. Waxay isku af-garteen in ay nolol wadaagaan. Waxa la galay qabanqaabadii geed-fadhiisiga. Goobta waxa laga dhigay mid ka mid ah hudheellada ugu wanaagsan magaalada ay daganyihiin.
Inantii hore ee dooratay nolosha xaraabaysiga ayuu warkii soo gaadhay in uu ninkii mehersanayo. Markiiba waxay dareentay in ay iska dayacday fursad wanaagsan. Halkan bey kacaa fadhiisatay oo ay dhinacan iyo dhinacanba u carartay. Sidii ay u socotay ayay tagtay goobtii uu meherku ka dhacayay. Umay soconin gudaha balse waxay hor istaagtay iyada oo niqaaban.
Markii uu meherkii dhammaaday ee la soo dareeyay, ayay u yeedhay ninkii oo sii fuulaya gaadhiga. Markiiba uu gartay in ay iyadii tahay. Si gaar ah ayuu ula baxay. Inantii wey ku dul oyday, waxay u sheegtay in ay khaldanayd. Wiilkii baa isku dayay in uu u dajiyo isaga oo u sheegaya in aanay dhib lahayn oo ay fursad labaad soo mari doonto. Inantii baa soo istaagtay in uu iyadana meheriyo oo uu ku labeeyo isla wakhti xaadirkan, balse, wuxu u sheegay in aanay macquul ahayn.
Niyad jab ayay kala timi hudheelkii. Waxay u tix galisay in ay maanta tahay maalin ay la soo kulantay jab saamayn ku yeelan doona nolosheeda.
Jabka kaa kasii daran waxa weeye, inantii berigii kula talisay in ay iska xaraabaysato ayaa loo sheegay in wiiga danbe la mehersanayo. Yaaa?! Oo ma gabadhii lahayd aynu xaraabaysanno ayaa mehersanaysa? Haaheey waa la meherinayaa. Arrintan labaadna, waxay inantii ku noqotay jab kale iyo niyad jab u sii biiray.
Hablaha waxa jira qaarkood oo isaga tallaabsada jar iyaga oo talo khaldan isa siinaya marka ay is waydiistaan. Iska hubi talada lagu siiyo, cidda aad talo bidana ku xulo waaya-aragnimo iyo daacanimo.
Axmed Cali Diiriye